ကိုဗစ်ကာလမှာ Online Learning က နောက်ဆို ပိုပိုပြီး အရေးကြီးလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ၊ ဆရာမ များ အားလုံးတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိူင်တဲ့ အတွက် အွန်လိုင်းကသင်ကြားခြင်း နည်းပညာနှင့် ပိုပြီး ရင်းနှီး လာနိုင်ဖို့ Learning to Teach Online အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်း ကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ခုထိ အွန်လိုင်းက နေ စာသင်ပေးဖို့ အခက်ခဲ ကြုံနေရတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ များ အားလုံးတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ် ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီနေ့ စတက်လို့ ရပြီဖြစ်လို့ အမြန်ဆုံး Enroll လုပ်ပြီး တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
Effort: 3-4 hours per week
Institution: UNSW Sydney
Session: Starts on January 7, 2021
Are you an educator? Have you ever wanted to understand more about how to design your class to make better use of educational technology – whether fully online or in blended contexts? Would you like to learn from those who have extensive practical experience with online technologies?
The Learning to Teach Online (LTTO) MOOC will help you developaworking understanding of successful online teaching strategies that you can apply in your own practice. The course is based upon the multi award winning open educational resource developed by Dr Simon McIntyre and Karin Watson.
#ISFMS #scholarshipformyanmar #FreeOnlineCourses #OnlineCourse
2,352 views0 comments